Tatitry ny WTTC vaovao hanosika ny fanarenana sy hanatsara ny faharetan'ny sehatry ny Travel & Tourism
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Tatitry ny WTTC vaovao hanosika ny fanarenana sy hanatsara ny faharetan'ny sehatry ny Travel & Tourism
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Tatitra WTTC vaovao hanosehana ny fanarenana ary hanatsara ny faharetan'ny sehatry ny Travel & fizahan-tany.
Miombon'antoka amin'ny Minisiteran'ny Fizahan-tany any Arabia Saodita momba ny tatitra vaovao manan-danja izay manasongadina ireo hevi-dehibe hamerenana amin'ny laoniny ny fivezivezena iraisampirenena, sy ny tolo-kevitra hitarika ny famerenana ny sehatry ny Travel & fizahan-tany, miaraka amin'ny fanatsarana ny fahaizany mivaingana.
Ny fandaniam-bola be amin'ny fitsapana sy ny famerana ny fivezivezena dia manakana ny tsy fahazoana mitsangatsangana ary mamorona rafitra elitista.
Miaraka amin'ny 34% amin'ny mponina eran'izao tontolo izao vita vaksiny, ny tsy fitoviana amin'ny hery fiarovana dia mandrahona ny fanarenana ara-toekarena.
Ny fandraisana anjaran'ity sehatra ity amin'ny harinkarena faobe manerantany dia nidina hatramin'ny $ 9.2 trillion tamin'ny taona 2019, ka lasa 4.7 trillion monja tamin'ny taona 2020, maneho fatiantoka efa ho US $ 4.5 trillion.
The World Travel & Tourism Council (WTTC) ary ny Minisiteran'ny fizahantany any Arabia Saodita natomboka androany androany ny tatitra vaovao iray manandanja izay manasongadina ireo hevi-dehibe hamerenana amin'ny laoniny ny fivezivezena iraisam-pirenena, sy ny tolo-kevitra hitarihana ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatry ny Travel & fizahan-tany, sady hanatsara ny faharetany.
Miaraka amin'ny areti-mandringana mitondra fitsangatsanganana iraisam-pirenena amin'ny toerana efa saika tanteraka, noho ny fanidiana ny sisin-tany sy ny fameperana mafy ny dia, nijaly kokoa ny Travel & fizahan-tany noho ny sehatra hafa tao anatin'izay 18 volana lasa izay.
Ny fandraisana anjaran'ity sehatra ity amin'ny harinkarena faobe manerantany dia nidina hatramin'ny $ 9.2 trillion tamin'ny taona 2019, ka lasa 4.7 trillion monja tamin'ny taona 2020, maneho fatiantoka efa ho US $ 4.5 trillion. Ankoatr'izay, rehefa namaky ny ati-valan'aretina ilay areti-mandringana, dia 62 tapitrisa ny asa fitsangantsanganana sy fizahantany very.
Misongadina ity tatitra vaovao ity WTTCny vinavinan'ny toekarena farany farany izay manambara ny faharetan'ity sehatra ity dia miadana kokoa noho ny nandrasana tamin'ity taona ity, izay mifamatotra indrindra amin'ny fanidiana ny sisintany sy ireo fanamby mifandraika amin'ny fivezivezena iraisam-pirenena.
Ny fandraisan'anjaran'ity sehatra ity amin'ny harin-karena faobe dia antenaina hitombo 30.7% isan-taona amin'ny taona 2021, izay misondrotra 1.4 trillion dolara amerikana fotsiny ihany, ary amin'ny taham-pahavitrihana ankehitriny, ny fandraisan'anjaran'ny Travel & fizahan-tany ho an'ny harin-karena faobe dia mety hahita taona mitovy amin'izany- fiakarana 31.7% amin'ny taona 2022.
Mandritra izany fotoana izany dia hiakatra 0.7% fotsiny ny asan'ity sehatra ity amin'ity taona ity, asa roa tapitrisa monja no arahana, ary ampitomboina 18% amin'ny taona ho avy.
Maneho ny krizy ratsy indrindra ho an'ny sehatry ny Travel & fizahan-tany, COVID-19 dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny toekarena manerantany, fa koa ny fiadanam-po sy fiveloman'ny olona erak'izao tontolo izao.
Talohan'ny nanombohan'ny areti-mandringana nisy fiantraikany mafy tamin'ity sehatra ity, Travel & fizahan-tany dia iray amin'ireo sehatra lehibe indrindra manerantany, tompon'andraikitra amin'ny iray amin'ny asa vaovao efatra noforonina manerantany teo anelanelan'ny 2015-2019 ary mpanampy lehibe amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ny fihenan'ny fahantrana, manome tokana fanararaotana ho an'ny vehivavy, vitsy an'isa, vondrom-piarahamonina ambanivohitra ary tanora.
Ity tatitra vaovao avy amin'ny WTTC, Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Minisiteran'ny fizahantany any Arabia Saodita dia manambara teboka fanaintainana izay mifantoka amin'ny fanamby maika hamerenana amin'ny laoniny ny fivezivezena iraisampirenena, nohon'ny filàna ny famahana ny fahalemen'ilay sehatra naseho nandritra ny areti-mandringana tamin'ny alàlan'ny famolavolana endrika ho avy maharitra sy mirindra ary maharitra.
Ity tatitra vaovao manan-danja ity dia mampiseho ny fomba fanidiana ny sisintany iraisam-pirenena, ny tsy fahazoana antoka noho ny fanovana ny lalàna, ny vidin'ny fitsapana tsy azo ihodivirana, ary ny tsy fisian'ny fifandimbiasana ary ny fametahana vaksiny tsy mitovy nanakana ny famerenana ny sehatry ny Travel & fizahan-tany tao anatin'ny 18 volana lasa.
Tamin'ny volana Jona 2020, ny firenena rehetra dia mbola nanana karazana fameperana ny dia, izay nitana andraikitra lehibe tamin'ny fidinan'ny fandaniana iraisam-pirenena 69.4% tamin'io taona io. Ireo fameperana ireo, izay niova hatrany sy nampisavorovoro, dia nanohy nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fahatokisan'ny mpandeha ny famandrihana, satria tsy nisy làlana mazava na marimaritra iraisana manerantany, momba ny fitakiana fitiliana, ny quarantine ary ny fenitry ny vaksiny.
Araka ny tatitra, ny fanadihadiana farany momba ny mpandeha eran-tany navoakan'i Oliver Wyman dia tsy mampiseho afa-tsy drafitra 66% hivezivezena any ivelany ao anatin'ny enim-bolana ho avy, ary latsaky ny iray amin'ny 10 (9%) no namandrika dia ho avy, mampiseho ny tsy fahatokisan-tena mitohy momba ny fanapaha-kevitra momba ny mpandeha. Ny fitsapana PCR lafo dia mitohy misy fiatraikany ratsy amin'ny mpandeha, mamadika ny fivoaran'ny fanaovana ny fivezivezena mora foana ary miteraka tsy fitoviana bebe kokoa.
Julia Simpson, filoha & CEO WTTC, hoy izy: "Ny sehatry ny fitsangatsanganana sy fizahantany no lakilen'ny fivelomana maro izay tohizan'ny tsy fahombiazan'ny fandaminana sy ny fanarahana fenitra ny fitsipika COVID-19 manerantany. Tsy misy fialan-tsiny amin'ny fametahana lalàna mifehy, ny firenena dia mila manambatra hery ary mampifanaraka ny lalàna. Firenena an-dàlam-pandrosoana maro no miankina amin'ny fitsangatsanganana iraisampirenena ho an'ny toekareny ary navela ho potika.
“Araka ny efa hita, 34% monja amin'ny mponina manerantany no vita vaksiny feno, mampiseho fa mbola misy tsy fitoviana lehibe amin'ny famelana vaksinina manerantany. Drafitra fanefitra haingana sy ara-drariny, miaraka amin'ny fankatoavana iraisan'ny vaksinin'ny OMS rehetra, no ilaina mba hanokafana soa aman-tsara ny dia iraisam-pirenena ary hamerenana eo noho eo ny asa ara-toekarena.
"Fantatry ny WTTC ny maha-zava-dehibe ny famerenana ny fahatokisan'ny mpanjifa, ary izahay dia namolavola, miaraka amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina miara-miasa, andiana protokolà Safe Travel ho an'ny indostria 11 manerana ny sehatry ny Travel & fizahan-tany. Ny tombokavatenay Safe Travels eken'ny besinimaro dia natsangan'ny toerana mihoatra ny 400 eran-tany. ”
Andriamatoa Ahmed Al Khateeb, Minisitry ny fizahan-tany ho an'ny Saudi Arabia nilaza hoe: "Ity tatitra ity dia mampiseho ny fiatraikan'ny COVID-19 teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany - ary ny tsy fitovizan'ny fanarenana ankehitriny. Mila mazava isika: raha tsy sitrana ny fizahantany dia tsy tafarina ny ekonomia.
“Tsy maintsy miaraka isika hanohana ity indostrian'ny mpitsikera ity, izay talohan'ny areti-mandringana dia tompon'andraikitra tamin'ny 10% ny harin-karena faobe manerantany. Miaraka amin'ity tatitra ity, Arabia Saodita dia miantso ny sehatra hiarahan'izy ireo mankamin'ny Redesign fizahan-tany ho amin'ny ho avy maharitra, feno ary maharitra. "
Ny tatitra dia mamaritra ny fahazoan-dàlana hahatratra ny famerenana amin'ny laoniny haingana ny sehatry ny Travel & fizahan-tany, satria lasa endemika ny COVID.
Ny fifantohana mifototra amin'ny fandrindrana iraisampirenena mba hanokatra indray ny sisin-tany, ny fisedrana ara-drariny ary ny fanaovana nomerika ho fanamorana ny dia, miaraka amin'ny faharetana sy ny fiatraikany ara-tsosialy eo amin'ny sehatry ny sehatra, dia hamerina amin'ny laoniny ny fivezivezena iraisam-pirenena sy ny sehatry ny Travel & fizahan-tany. Ireo fepetra ireo dia hamonjy asa an-tapitrisany, ary hahafahan'ny vondrom-piarahamonina, orinasa, ary toeran-kaleha miankina amin'ny sehatry ny Travel & fizahan-tany ho sitrana tanteraka sy hambinina indray.